Umsebenzi okanye Dlala •Bucala •WiFi ethembekileyo •Lala 6 (#1)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAndi
Amaqela wamkelekile! Ezantsi kwedolophu yaseBurley, le yindawo entle yokuzola kunye nokulula. Eli gumbi li-3 lokulala, elinefenitshala epheleleyo linendawo eyaneleyo yamaqela! Ikhitshi labucala, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, lilala ezi-6 kwiibhedi ezi-4. Zonke iilineni, izitya kunye nezinye izinto zokuthuthuzela zesidalwa zibonelelwe ngokupakisha ukukhanya. Uyakonwabela ukuhlala ucocekile, umhle, ubucala kwaye ukhululekile @ Gate House eBurley. Wamkelekile akhaya!
Igumbi 1: Queen
Igumbi 2: Ligcwele
Igumbi lesi-3: iibhanka ezimbini
KwiGate House eBurley le bhedi ye-1 Q, 1F, iseti e-1 yeebhedi ezingamawele. Le suite ifakwe ngokupheleleyo ukuze uhlale kamnandi. Ibekwe kumbindi wedolophu yaseBurley yenkcubeko, ivenkile, kunye nendawo yeshishini lasekhaya. Eli linyathelo elitofotofo elikude nethala leencwadi leSixeko, iPaki yeNcwadi yamaBali, iPoli, iKhosi yeGalufa, iKlabhu yezeMpilo ye-Elite, indawo yokutyela, iithiyetha zemiboniso bhanya-bhanya, iZiko loBugcisa boBugcisa bukaKumkani, nokunye okuninzi. Inodibaniso olugqibeleleyo lokuthuthuzela, ukulula, ubugocigoci, kunye nesimbo. Indawo yokuhlala inefenitshala entle, izixhobo zombane ezipheleleyo, oomatrasi bodidi, nokunye. Undwendwe ngalunye lubonelelwa ngezinto zokuhlambela, abenzi bekofu, izixhobo zokomisa iinwele, ii-ayina ezineebhodi zoku-ayina kunye nezinto zokuhlambela. Indawo yokupaka iyafumaneka. Umtsalane waseNgingqini nguMlambo iNyoka (ukukhwela isikhephe kunye nokuloba), iPomerell Ski Resort (ukutyibilika ekhephini, ukukhwela ikhephu kunye nokuhamba ngekhephu), kunye nesiXeko esidumileyo saMatye (Ukukhwela iRock & UkuHamba).
Kwigumbi lobushushu kunye neBalcony yokupholisa umoya
Kwigumbi lokufikelela kwi-Intanethi (WiFi)
Ubungakanani obugcweleyo: ifriji, isitovu, iMicrowave
Umabonakude wentsimbi (Isitya)
Inkonzo kaMaid yeVeki nganye (kuxhomekeke kubude bokuhlala)
Umenzi weKofu oFanelisayo weKofu
Ukulala 4-6 abantu
~IiNkcukacha zeNdlu yeSango~
Imigangatho emi-2 Yakhiwa ngo-1918
I-Alarm yomsi kwi-suite
Health Club 2 Iibhloko
~Inkulu kukuhlala ixesha elifutshane okanye lesiqingatha ixesha elide ngenjongo yoShishino, iKhenketho okanye phakathi kwamaKhaya (isakhiwo). Olu lukhetho olukhulu kwiimfuno zakho! Masibonelele ngobutofotofo beKhaya kude neKhaya!
Uya kuthanda ukuba ungahamba uye epakini, kwithala leencwadi, evenkileni, kwindawo yokutyela, kwindawo yokuphumla, kwiklabhu yezempilo okanye kwiPosi kwaye konke kungaphakathi kweebhloko ezimbalwa.
Ndiyakonwabela ukudibana nabantu kodwa andifane ndidibane neendwendwe zam, ngaphandle kokuba ufuna into ethile. Nangona ndihlala ndikwipropathi ndilungisa kwaye ndisebenza eyadini kwaye ndihlala kumgama weemayile ezimbalwa.
Nceda ukhumbule ukuba le yipropathi yeeyunithi ezininzi ngoko ke uya kuva ingxolo evela kwezinye iindwendwe zisebenzisa izinyuko okanye ngaphezulu kwakho ngamaxesha athile. Kunqabile ukuba ndibe nesikhalazo. Kwakhona, yiba nolwazelelelo.
Ndiyakonwabela ukudibana nabantu kodwa andifane ndidibane neendwendwe zam, ngaphandle kokuba ufuna into ethile. Nangona ndihlala ndikwipropathi ndilungisa kwaye ndisebenza eyadini…